Uyalikhumbula elaxesha liXhego liXhwaye malunga neebhulukhwe ezitshisayo kwiIdol yaseMelika? - Inkcubeko Yopopu
Ukunqabana Kunye Nokucinga
Uyalikhumbula elaxesha liXhego liXhwaye malunga neebhulukhwe ezitshisayo kwiIdol yaseMelika?
Kubathandi bomculo abaninzi, Idol yaseMelika (eqale ixesha layo le-15 kunye nelokugqibela phezolo) izise umhlaba kubantu abanetalente ukubetha umculo kule minyaka ili-14 idlulileyo, wonke umntu evela UJennifer Hudson kwaye UCarrie Underwood ukuya UFantasia Barrino kwaye URuben Studdard Ukuphumelela iintliziyo zabantu baseMelika ngelixa babulala Ibhilibhodi iitshathi kunye nokulinganiswa kweNielsen ngexesha layo.
Okothusayo kukuba yayiluvavanyo olunye eAtlanta olwalusasazwa kwiminyaka emithandathu eyadlulayo olwavuthela zonke ezo ndumiso.Yabona, inkqubo yophicotho inokuba yeyona TV ibalaseleyo phaya; ukubona imvumi ihamba phambi kwamagqala anamava kwaye iphile okanye isweleke ngokwenza loo nto inokubangela ukoyikeka, ukoyikeka, okanye kwimeko ka-General Larry Platt owayeneminyaka engama-62 ubudala, ongoyena mkhulu , Olona hlolo luhlekisayo ngalo lonke ixesha.
Isitshixo apha yiminyaka yakhe; Ngelo xesha, iimfuno zobudala zazivela kwi-15 ukuya kwi-28, ke ukubona (inkulu) indoda enkulu ingena egumbini ukuyenza yayisele 'masiyihlekise into yalomfo'. Kunzima ukwazi ukuba yintoni USimon Cowell , URandy Jackson , okanye UMary J. Blige babecinga ukuba uLarry Platt wayeza kwenza ntoni, kodwa sicinga ukuba bebengekho kwimbali yakhe ... okanye wayenakho.
ezona pussi zintle ehlabathini
Kunzima ukubiza into awayeyenza 'ukucula' uPlatt. Ungumfo omdala ofanelekileyo onemibala ehamba ehamba esithi uyakube esenza ingoma yakhe malunga nabantu 'ekufuneka bekhuphe ibhulukhwe yabo phezulu.' Omnye unokucinga ukuba uhlobo oluthile lokucula umphefumlo okanye u-doo-wop luye ezantsi, kodwa u-Jikelele olungileyo uphuma ebhokisini, ecula ngabantu 'bejongeka njenge-FOOL' ngeebhulukhwe zabo emhlabeni, ukugoba, ukujikeleza, ukubetha ngendlela ethile- amanqaku aphezulu. Isiqhelo sakhe sibeka i-MJB da MVP kwi-hysterics, kwaye ngelixesha ahlasela ulwahlulo, wonke umntu uyazicaphukela.
Iiresiphi zokupheka zekhekhe lomtshato kwibhokisi yokuxuba
Ngokuqinisekileyo, indlela yesiqhelo katat'omkhulu yayiphambene ngokupheleleyo, kodwa kuya kufuneka ukuqhwabele izandla ukuzimisela kwakhe, kwaye umyalezo wakhe ngulo ubukhala kwiindawo ezimnyama okwexeshana. Xa umntu esenza ulwazi malunga nokuba yintoni uLarry Platt malunga, eneneni libali elinomdla.
'Ngokubanzi' ULarry Platt unjalo umlweli wamalungelo oluntu ngubani owayesenza 'iibhulukhwe emhlabeni' ukusukela ngo-2001 e-Atlanta njengenxalenye yephulo lokufumana abantwana ekunciphiseni ibhulukhwe emva kokucekiswa ndibone umfana omncinci eAtlanta ngeebhulukhwe zakhe zisaleka kunye ne-pacifier emlonyeni wakhe. Phambi konyaka wakhe wama-2010 Idol yaseMelika imbonakalo, uPlatt wade wayicula ingoma ngo-2008 nango-2009 kwi-Centennial Olympic Park nakwi-Sweet Auburn Heritage Festival, ngokwahlukeneyo. Njengoko ibali lihamba, uPlatt wakhuthazwa ngomnye umlweli wamalungelo oluntu, USally Harley , Ukuzisa ingoma kwisizwe nge Idol yaseMelika , Kwaye emva kokwaliwa kaninzi ngenxa yobudala bakhe, waphoswa okokugqibela wanika intsebenzo yentsholongwane ngoku.
Eyona nto isendle yingoma evelisiweyo kwaye yarekhodwa 'Ibhulukhwe eMhlabeni,' ukuyikhulula ngoFebruwari ka-2010 kwiKing Music yaseMelika, ekuthiwa yakhuphela ngaphezulu kwama-260,000 okhutshelweyo.
Kwiminyaka ukusukela 'ibhulukhwe emhlabeni' yaba luvakalelo lwentsholongwane, inkwenkwezi kaPlatt khange ikhanye. Babe izityholo kaPlatt eba 'ibhulukhwe emhlabeni' kwingoma ye -Green Brothers 'ka1996' iipokotho ezibuyayo emgangathweni, 'kwaye kwafuneka aphephe amarhe okufa kwakhe ngo-Agasti ka-2010.
amantshontsho amhlophe 2 ukukhutshwa komhla kuthi
Ukusukela ngoko, ubomi bakhe eluntwini kubonakala ngathi buzolile, mhlawumbi ngenxa yokuba ukujija ibhulukhwe yakho ayisosimbo. Mhlawumbi kufuneka 'Jikelele' uLarry Platt ukubulela.
UKevin Hart Knock uJerry Seinfeld Ushiye isihlalo sobukhosi ukuze abe liHlabathi eliHlahlwayo eliHloniphekileyo
Riff Raffs Amaxesha amaYouTube aBalaseleyo
Ungakholelwa kuhlobo lweHype: Ukuzalwa kwesizwe akuyiyo iMovie elungileyo
Umdlalo weSelfowni IJurassic yeHlabathi ePhilayo ibeka iiDinosaurs apho yonke iPokémon yakho ibikade ikho
Ukuphela kweSharknado emva koNombolo 6 kuba ulithatha njani ixesha lokuHamba eliPhezulu kunye neNqanawa yeNowa?
Yenza ibhokisi yekhekhe ingcamle njengendawo yokubhaka
Iapilesauce spice cake zokupheka ukusuka ekuqaleni
nguNicki minaj uthandana nomatshini wokugaya omnene
Umlawuli we-Emperor Palpatine uthi uGeorge Lucas ngekhe abuyise isimilo sakhe
UMcDiarmid, kudliwanondlebe, uthi umyili we-Star Wars uGeorge Lucas akazange azimisele ukuvuselela isimilo emva kokufa kwakhe ekubuyiseni iJedi.
Umntu ohlekisayo ohlawulelwa kakhulu eMhlabeni nguKevin Hart, ofumene ngaphezulu kokuphindwe kabini kunoJerry Seinfeld
Ixesha langaphambi kweShelved 4 yesiQendu seBlack-ish ngoku iyafumaneka kwiHulu
Inkulumbuso yesi siqendu iza emva kokuba umboniso ukhusele iimbasa ezine zePrimetime Emmy Award.